မန်ချက်စတာကိုပြောင်းဖို့ သတင်းကြီးနေတဲ့ မက်ဆီရဲ့ အပြောင်းအရွှေ့ ကောလဟာလအပေါ် မှတ်ချက်ပေးလိုက်တဲ့ ဂယ်ရီ နဗီးလ် - SPORTS MYANMAR
မန်ချက်စတာကိုပြောင်းဖို့ သတင်းကြီးနေတဲ့ မက်ဆီရဲ့ အပြောင်းအရွှေ့ ကောလဟာလအပေါ် မှတ်ချက်ပေးလိုက်တဲ့ ဂယ်ရီ နဗီးလ်
By Edi Tor August 29, 2020
ဘာစီလိုနာ အသင်း ရဲ့ တိုက်စစ် ကစားသမား ဖြစ်သူ လီယွန်နယ် မက်ဆီဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ ရက်ပိုင်း တုန်းက ကတ်တလန် မြေမှ အလွတ် ပြောင်းရွှေ့ကြေး နဲ့ ထွက်ခွာခွင့် ပေးဖို့ ဘာစီလိုနာ အသင်း ရဲ့ တာဝန် ရှိသူ တွေကို ပြောကြား ခဲ့တဲ့နောက် သူဟာ ဘယ် အသင်းကို ပြောင်းရွှေ့ မလဲ ဆိုတဲ့ သတင်း တွေဟာ ကျယ်လောင် လာခဲ့ရ ပါတယ် ။
အဲ့ဒီ ထဲမှာတော့ ပက် ဂွာဒီယိုလာ ရှိနေတဲ့ မန်စီးတီး အသင်းဟာ မက်ဆီကို ခေါ်ယူဖို့ ထိပ်ဆုံးမှ သတင်းကြီးခဲ့ သလို ညာ တောင်ပံ တိုက်စစ် ကစားသမား တစ်ဦး ခေါ်ယူလို နေခဲ့တဲ့ မန်ချက်စတာ အသင်း ကလည်း PSG ၊ အင်တာ မီလန် ၊ ဂျူဗင်တပ် အသင်း တွေနဲ့ အပြိုင် နာမည်ထွက် နေခဲ့ပါ သေးတယ် ။
ဒါပေမယ့် ပရီးမီးယားလိဂ် ထိပ်သီး မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် အသင်း ရဲ့ ဂန္ဓဝင် ကစားသမားဟောင်း ဖြစ်သူ ဂယ်ရီ နဗီးလ် ကတော့ ဘာစီလိုနာ အသင်းမှာ အာဏာပါဝါ ပြိုင်ဆိုင်မှုတွေ ရှိနေကြောင်း ၊ အဆုံးသတ်မှာ မက်ဆီဟာ ကတ်တလန် မှာပဲ ဆက်လက် ရှိနေ လိမ့်မယ် လို့ သုံးသပ် ပြောကြား သွားခဲ့လိုက် ပါတယ် ။
” ဒါဟာ နိုင်ငံရေး လှည့်ကွက် ဆန်လှတဲ့ အာဏာ ပါဝါ ပြိုင်ဆိုင်မှု တစ်ခု ပဲလို့ ကျွန်တော် ထင်ပါတယ် ။ မက်ဆီဟာ သူ့ရဲ့ အခွင့်အရေး တွေကို အသုံးချ နေတယ်လို့ ကျွန်တော် ထင်ပါတယ် ။ ဒါဟာ ကျွန်တော် တွေးတာထက် ပိုတဲ့ အရာတစ်ခု ဖြစ်ကောင်း ဖြစ်နိုင် ပါတယ် ။ ဒါပေမယ့် အဲ့တာ တွေက ဒီမှာပဲ အဆုံးသတ် သွားမယ် လို့ပဲ ထင်မိ ပါတယ် ”
” ကျွန်တော့် အတွက် ကတော့ ဘာစီလိုနာ အသင်းဟာ ဒီလို ကစားသမား ကို ဆုံးရှုံး သွားမယ် ၊ မက်ဆီ ဟာ ကစားသမား ဘဝ ကို ဒီမှာ မကုန်ဆုံး နိုင်ဘူး ဆိုတာ တွေက ကျွန်တော့် အတွက်တော့ မယုံကြည် နိုင်ဖွယ် အကြောင်းအရာ တစ်ခု ပါပဲ ။ သူ တစ်ကယ်ပဲ အသင်းပြောင်း နေချင်တာလား ? ဖြစ်ကောင်း ဖြစ်နိုင် ပါတယ် ”
” ဒါပေမယ့် အသင်း ရဲ့ ဥက္ကဌ ၊ ဘုတ်အဖွဲ့ဝင် ၊ တာဝန် ရှိသူတွေ အားလုံး နဲ့ တွေ့ဆုံ ရမယ် ၊ အားလုံးက သူ့ဖက် မှာပဲ ဆက်လက် ရပ်တည် ပေးနေ ကြမယ် ဆိုရင် မက်ဆီဟာ ကတ်တလန် မှာပဲ ဆက်လက် ရှိနေပါ လိမ့်မယ် ။ အကယ်လို့ သူဟာ ပရီးမီးယား လိဂ်ကို ပြောင်းရွှေ့ ဖြစ်မယ် ဆိုရင် ပက် ရှိနေတဲ့ နေရာ က သူ့ အတွက် အကောင်းဆုံး ဖြစ်နေပါ လိမ့်မယ် ”
” ကျွန်တော် အဲ့တာမျိုး အလိုရှိ မလား ? yes လို့ ပြောပါရစေ ။ ကျွန်တော်တို့ တွေဟာ မက်ဆီကို အနီးကပ် ကြည့်ရှုခွင့် ရရှိ နိုင်မယ်လေ ။ သူ့ကို လွန်ခဲ့တဲ့ 10 နှစ်လောက် ကတည်းက ကျွန်တော် အကြိမ်ပေါင်း များစွာ အနီးကပ် ကြည့်ရှု ခဲ့ဖူး ပါပြီ ။ ကျွန်တော် သူ့ကို ဆက်လက် မြင်တွေ့ချင်ပါ သေးတယ် ”
” ဒါပေမယ့် ကွင်းအပြင်မှာ ပရိသတ် တွေနဲ့ နှုတ်ဆက် နေတဲ့ မက်ဆီ သွားမယ့် လမ်းကြောင်းမှာ ကျွန်တော် စောင့်နေမလား ဆိုရင်တော့ no ပါလို့ ပြောပါရစေ ။ ကျွန်တော် ကတော့ မက်ဆီဟာ ပြောင်းရွှေ့မယ့် ပြိုင်ဖက် အသင်း အတွက် အရမ်းကောင်း မနေဖို့ မျှော်လင့် နေမှာ အသေအချာ ပါပဲ ” လို့ ဂယ်ရီ နဗီးလ် က ထုတ်ဖော် ပြောကြား သွားခဲ့လိုက် ပါတယ် ။
မက်ဆီနဲ့ ပက်ဂွာဒီယိုလာ တို့ဟာ ကတ်တလန် မြေမှာ အတူ ရှိနေ ခဲ့စဉ် တုန်းက ဆုဖလား အောင်မြင်မှုတွေ များစွာကို ရယူ ဆွတ်ခူး နိုင်ခဲ့ကြသလို ပြည်တွင်းမှာ သာမက ဥရောပမြေမှာပါ အကောင်းဆုံး အသင်း တစ်သင်းကို ပိုင်ဆိုင် နိုင်ခဲ့ကြ ပါတယ် ။ အဆိုပါ အချိန် ကာလ တွေဟာ မက်ဆီ ရဲ့ ကစားသမား ဘဝ အကောင်းဆုံး အခိုက်အတန့် တွေလည်း ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ် ။